नेकपाकी नेता बिनिता शाहीको किर्ते धन्दा प्रमाणसहिद बाहिरियो – Smartkarnalinews
नेकपाकी नेता बिनिता शाहीको किर्ते धन्दा प्रमाणसहिद बाहिरियो
बिहिबार, भदौ ११, २०७७ 6:49:22 PM	मा प्रकाशित
कालिकोट। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोटकी जिल्ला सचिवालय सदस्य कृष्णकला शाही (बिनिता) ले किर्ते कागजातहरु मिलाएर लाखौ रकम अपचलन गरेको पाईएको छ।
शाहीले गाँउपालिकाको लेटरप्याट छाप तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको महाँबै गाँउपालिकाले जनाएको छ। सदस्य शाहीले कागजातहरु किर्ते गरेर अग्रिम बहुउद्देसीय कृषि सहकारी संस्था लि. महाबै, २ नामक सहकारी संस्थाबाट कालिकोट जिल्लाका बिभिन्न सरकारी कार्यालयसँग किर्ते कागजातहरु मिलाई सम्झौता गरि रकम खाने गरेको पाईएको हो।
शाहीले जिल्लाको कृषि विकास कार्यालय तथा भु–संरक्षण मन्त्रालय बनस्पिति विभाग कार्यालयसँग सम्झौता गर्दा गाँउपालिकाका सम्पुर्ण कागजातहरु किर्ते गरि लाखौ रकम हिनामिना गरेको, कागजातहरु किर्ते बनाई भुक्तानि लिएकोे स्थानीय बिमल शाही बताउँछन्। शाहीले कृषि विकास कार्यालयबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ किर्ते हस्ताक्षर गरेर गाँउपालिका वडा नम्बर २ र ३ का वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा अनुगमन गरेको माइन्युटसमेत किर्ते गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै वडा नम्बर ७ राम्निकी संगिता शाहीलाई ३७ हजार सात सय रुपैया भुक्तानि दिएको नक्कली भरपाई बनाएको समेत पाइएको छ। उक्त स्थानमा संगिता शाही नामको केटी कोही पनि नभएको र गाँउपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको भेटियो।
महाबै गाँउपालिकाको पत्र संख्या २०७५/०७६, चलानि नम्बर २६६ तथा मिति २०७६/०३/२२ गतेको कृषि विकास कार्यालय कालिकोटसँग सम्झौता गर्ने बारे पत्र तथा उक्त गाँउपालिकाकै पत्र संख्या २०७६/०७७, चलानी नम्बर २३० तथा मिति २०७७/०३/१० गतेको बन तथा भु–संरक्षण मन्त्रालय बनस्पिति बिभाग थापाथली काठ्माडौँलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानिका लागि सिफारिस पत्रसमेत किर्ते गरेको पाइएको छ।
सदस्य शाही सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको र अरु सदस्यहरुलाई थाह नै नदिएर यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको एक जना सहकारी सदस्यले बताएका छन्। महाबै गाँउपालिकाका स्थानीय बिमल शाहीका अनुसार उक्त समयमा आफ्नो गाँउपालिकाको चलानि नम्बर ८ सयभन्दा बढि गैसकेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा चलानी नम्बर दुई सयमात्र हुनु सिधै किर्ते भएको र गाँउपालिकाको लेटरप्याड, छाप तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको दाबी गरे।
यता सदस्य शाहीसँग यसका बारेमा बुझ्न खोज्दा सबै आरोपहरु भएको दाबी गरिन्। कर्णाली सन्देशसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘प्रश्न उठेको छ। ममाथि विभिन्न तरिकाले हेरिएको छ। आरोपहरु लाग्छन्। सत्य फरक हुन्छ।’
तपाईंले गाउँपालिका र अन्य अधिकारीहरुको हस्ताक्षर, लेटरप्याड किर्ते गर्नु भएको रहेछ, ति सबै प्रमाणहरु हामीकहाँ आईपुगेका छन्। यो कसरी आरोप भयो ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा शाहीले भनिन्, ‘केही मिडियाहरु ममाथि षडेयन्त्रपूर्ण तरिकाले परिचालित छन्। महाबैंकै केही मान्छेहरु लागेका छन्। सबै आरोप हुन्। बाहिर आएको कुराहरुमा सत्यता छैन।’
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ ११, २०७७ 6:49:22 PM